Recollection TAFIKA – Ecar Sainte Anne Anjomakely
RECOLLECTION TAFIKA SY NY VONA NIARAHANA TAMIN’I MASERA ELSIE:
Tantara kely no nanombohan’I Masera ny fotoana : nisy olona telopolo taona nivavahana hono, angamba efa an-kilao maro ny Komonio lany, ny Toriteny tao am-piangonana hatrizay anefa tsy misy tadidy ary nilaza koa izy fa tsy nisy vokany teo amin’ny fiainany akory izany rehetra izany ; nisy olona hafa koa efa telopolo taona nanambadiana, nilaza izy fa tsy tadidiny ny sakafo nokarakarain’ny vadiny hatrizay fa kosa ny hitany dia velona tsara izy ankehitriny. Toy izany ny vavaka, raha tsy ampy vavaka manko isika dia tsy ho vita izay tokony atao.
Maro ny karazam-bavaka azo atao fa ny natoron’i Masera antsika dia:
-ny vavaka hariva (amin’ny fito ora hariva),
-ny fanaovana chapelet,
-ny famakiana Evanjely isam-pianakaviana.
Tsara koa raha vao mifoha isika dia mandamina ny fandaharam-potoantsika mandritra ny andro ary mametraka izany eo amin’I Jesoa avy eo.
Fa ilaina koa anefa ny vavaka mangina (prière personnelle) hoy izy andraisana ny hafatra avy amin’Andriamanitra. Miezaka maka antsasak’adiny na adiny iray ao anatin’ny herin’andro makany amin’ny Chapelle manao vavaka samirery. Tsy maintsy misy vokany eo amin’ny fiainantsika izany.
Maro koa ireo manontany hoe toy ny ahoana ny fomba fivavaka ao amin’ny Chapelle, ny fomba atoron’I Masera antsika dia:
-ny miteny izay tiana ambara amin’ny Tompo aloha
-avy eo akipy ny maso ary sokafana ny tanana sady mihaino Azy
-ary miteny Aminy hoe: “Jesoa ô! Matoky Anao aho!”
Ny fomba fakàna “concentration” na fifantohana eo am-pivavahana dia ny miaina tsara ary isaky ny mifoka rivotra dia toy ny hoe miditra ao amintsika I Jesoa.
Isika Kristianina dia sady tokony hivavaka no hampivavaka. Ahoana nefa ny fomba atao mba hampivavaka?
-Mitaona ny olona hivavaka,
-Tsy manintona mason’olona amin’ny fitafiantsika ao am-piangonana,
-Manaja fotoana (tsy miditra tara),
-Eny fa na dia ny fomba fipetraka aza…
Ireo rehetra ireo mantsy dia miteraka fakam-panahy ho an’ny hafa raha tsy voahaja ka tsy mampifantoka azy amin’ny vavaka izay atao (=tsy mampivavaka).
Ny vavaka dia mampiova sy mampahery ary manome hafaliana sy fiadanam-po. Ny fiadanam-po no ahafahantsika miatrika ny olana isan-karazany avy eo satria mahatoky isika fa na dia maro aza ny olana dia manana vahaolana ao amin’Andriamanitra avokoa izy ireny.
Ny olon-drehetra koa dia afaka mahazo valim-bavaka fa ny mitady sy mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra no tena sarotra. Ny fahatokisantsika Azy no ilaina. Mivavaka isika, mangataka izay zavatra iriantsika ary matoky fa omeny antsika izany raha izay no sitrapony. Ao anatin’ny fahanginana no ahenoantsika izany sitrapon’Andriamanitra izany.
Soeur Elsie sy Mr Rivo
Ny fiainantsika koa dia tahaka ny tongolo. Ny tongolo dia entina hanomezana tsiro ny sakafo fa raha simba nefa ny tongolo iray dia mahatonga fahasimbàna amin’ny tongolo rehetra izy. Toy izany koa ny atody, tsara ny tsirony ary ilaina izy fa raha simba kosa izy dia mamoaka sy manaparitaka fofona ratsy. Izany hoe raha manao ratsy isika dia mora miparitaka amin’ny manodidina antsika izany ary manimba ny fiaraha-monina. Ny tanjona dia mba tsy ho tongolo sy atody simba ny fiainantsika. Ny tanjona tena tokony ho tratrarintsika dia ny ho tonga olomasina na ho an’ireo manambady izany na ho an’ireo voaantso ho amin’ny fiainam-boatokana.
Maro ny fitsapana sy ny olana nihatra tamin’I Masera hatramin’ny nipetrahany teto Anjomakely tamin’ny 12 Marsa 2010 araka ny nambarany fa ny zavatra sarotra hoy izy mampitombo hery sy mampitombo ny finoana. Teo koa ny fanaovana Adoration izay miteraka hafaliana sy fiadanana. Tamin’ny 21 Novambra 2010 moa no nanaovana ny Adoration voalohany tao amin’ny Chapelle Anjomakely. Ny teny hoe Anjomakely rahateo misy ny hoe “Zoma” izay andro natokana ho an’ny Fo Masin’I Jesoa koa dia natokana ho an’ny Fo Masin’I Jesoa I Anjomakely ary atao isaky ny zoma ny Adoration. Tamin’izany fotoana izany koa no nitsirin’ny hevitra hananganana ny “Chapelle d’Adoration perpétuelle”.
Mampatanjaka ny fanahy koa ny Adoration hoy izy. Tahaka ny fiara mila solika vao afa-mandeha. Ny fiara dia ny fiainantsika ary ny vavaka no solika mampandeha azy. Mila “rétroviseur” ihany koa anefa isika mba hampandeha tsara ny fiainana dia ny “recollection” sy ny fitodihana kely amin’ny lasa sy amin’ny fiainana izany. Mila miditra “garage” koa isika isan-taona na isam-bolana dia ny fanaovana “retraite” izany. Indraindray mety ho tratran’ny “panne” noho ny antony samihafa toy ny tsy fahampian-tsolika na ny tsy fahampian’ny “vérification” atao amin’ny fiara, sns…
Nasian’I Masera teny manokana ny amin’ny tso-dranon’ny Sakramenta Masina. Manao famantarana ny Hazofijaliana moa isika amin’izany ary sady afaka manao vavaka anaty toy izao:
-Amin’ny anaran’ny Ray: Andriamanitra ô, omeo saina tsara aho,
-Sy ny Zanaka: omeo fitiavana ampy ho ahy sy ampy hizara amin’ny hafa aho,
-Sy ny Fanahy Masina: omeo hery hitondra ny hazofijaliana isan’andro aho.
Hafatr’I Soeur Elsie:
Maro ny hafatra nomen’I Masera Elsie antsika, anisan’izany ireto:
-Hafatry ny mamany : Isan’andro :
Vavaka manokana : 1h
Lecture spirituelle : 1h
Mijery vaovao : 1h
Mamangy mahantra sy manao asa soa : 1h
-Hafatry ny dadany: “Manaova asa soa amin’ny olona rehetra na dia ny olona manao ratsy anao aza”.
-Aoka mba hifankatia toy ny fianakaviana iray isika eto Anjomakely.
-Aoka mba hitombo fitiavana an’Andriamanitra isika rehetra ary avy eo hitondra izany fitiavana izany amin’ny olona. Ny fiainantsika dia toy ny vera misy rano mantsy hoy I Masera. Raha tsy feno ny vera tsy afaka mizara sy manome ny hafa fa raha feno kosa izy, izany hoe feno ny fahasoavana sy ny fitiavan’Andriamanitra ny fiainantsika dia mizara sy mandeha ho azy any amin’ny olona isika.
-Ny zavatra ataontsika dia tsy atao ho fitiavan-tena fa ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany. Izy Andriamanitra no maniraka antsika hanao ny asany.
-Na anaty olana na anaty hafaliana dia tokony mitodika amin’Andriamanitra hatrany isika ary milaza Aminy hoe: “Matoky Anao aho!”
-Amin’ny Fanolorana mandritra ny Lamesa dia mitondra ny olana sy ny tebitebintsika no anjarantsika rehefa mandrotsaka ny rano ao anaty kalisy ny Pretra fa manamaivana antsika izany.
-Rehefa mivavaka dia tokony hisy fifantohana tsara. Noho izany tsy tokony hahare na inona na inona mihitsy isika raha tena mivavaka am-pifantohana marina. Tokony ho ao an-tsaina tsara ny zavatra atao eo am-pivavahana. Ny tsy fifantohana koa mantsy dia tsy mampisy vokany ny vavaka izay atao.
-Mila mianatra mangina koa isika. Matetika isika raha vao tafaraka dia mifosa sy mitsara olona no atao fa andao mba samy hiezaka hahita zavatra tsara amin’ny olona tsirairay ary tsy hiresaka afa-tsy zavatra tsara.
-Mila mitady izay hevitra rehetra hanatsaràna ny fiainan’ny tokan-tranontsika tsirairay isika satria tsy misy afaka hanatsara ny an’ny hafa. Raha te-hanatsara ny fiaraha-monina isika dia ny tenantsika no tokony hatsaraina voalohany. Ny tenantsika no Tempoly tokony ho masina voalohany.
-Tsy maintsy miara-miasa ny tanantsika sy ny tanan’Andriamanitra vao hahazo ny famonjena isika fa tsy mety ny miandry fotsiny sy miraviravy tanana. Matoky an’Andriamanitra isika fa kosa miezaka manao izay azontsika atao sy izay tandrify antsika
-Taonan’ny Famindram-pon’Andriamanitra: Mila manahaka an’Andriamanitra isika, mahay mamindra fo. Ny olona tiana moa mora hamindràna fo ihany fa ny olona tsy hifankahazoana kosa mila antonina ary iresahana ary tokony mifamindra fo sy mitaona azy hivavaka.
-Mila manana fanetren-tena isika satria tsarovy lalan-dava fa isika dia mpanompo fa tsy natao ho tompoina.
-Mahatonga fahagagana (miracles) ny vavaka.
-Ny fanampiana ataontsika amin’ny mahantra na dia kely aza dia efa zava-dehibe.
Lalao « Tombola » teto amin’ny fiangonana